सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समाजिक संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण - Samriddha Online
समृद्ध अनलाईन २३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०९:१२ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ५८५९ पाठक संख्या
ओखलढुंगा, बैशाख २३ गते । समाजसेवी तथा एमाले नेता हंसराज वाग्लेले जिल्लाका सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्था र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । प्रदेश १ नं. कमिटी सदस्य वाग्लेले बुधबार मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेका हुन् ।
उनले सिद्धिचरण नगरपालिकालाई २ सय ५ सय मास्क र २० लिटर सेनिटाइजर, ९ नं. वडा कार्यालयलाई २ हजार ५ सय र २० लिटर सेनिटाइजर, मोलुङ गाउँपालिकालाई २ हजार मास्क र १० लिटर सेनिटाइजर उपलब्ध गराएका छन् ।
त्यस्तै खिजीदेम्वा र चिशंखुगढी गाउँपालिका गाउँपालिकालाई प्रति पालिका १ हजार मास्क र १० लिटर सेनिटाइजर उपलब्ध गराएका छन् । जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायलाई पनि मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५ सय मास्क तथा १० लिटर सेनिटाइजर तथा शसस्त्र प्रहरीलाई ३ सय मास्क र ५ लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ । जिल्लामा १५ हजार मास्क र १ सय लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिने वाग्लेले जानकारी दिए । उनले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको वाग्लेले जानकारी गराए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष वाग्ले भलिवलका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन् ।
त्यस्तै प्रेस चौतारी नेपालले जिल्लाका रेडियोहरुलाई मास्क वितरण गरेको छ । जिल्लाका ४ रेडियोमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुका लागि ४ सय मास्क वितरण गरिएको हो । मास्क चौतारीका केन्द्रिय सदस्य शिव ढुंगानाले हस्तान्तरण गरे का थिए । त्यसै गरि अनेरास्ववियुका केन्द्रीय कमिटी सचिव दिपक फुयलले उपलब्ध गराएको ५ लिटर सेनिटाइजर सञ्चारकर्मीहरुका लागि पत्रकार महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष विनु राईलाई महासंघका प्रदेश समितिका सदस्य लिला सुनुवारलाइ हसन्तरण गरिएका छ ।